Umzi mveliso wokukhanya kwelanga - China abavelisi bokukhanya kwelanga kunye nababoneleli
Inkqubo yangaphandle yokuKhanyisa uSolar eGadini
1. Ukulawula kude;
2. IPIR Motion Sensor yoGcino lwaMandla;
3.Ukuqaqamba Adjustable kunye Timer Umsebenzi;
4. I-ALS + VFT + TCS yeTekhnoloji yoBusuku bonke bokuKhanya kwanaMini enamafu okanye enethayo.
Isicelo: Intendelezo / Igadi / ucango lwegaraji / udonga / indawo yokugcina izinto / isitali / isango / isiqu sokubaleka / ipaseji njl.
1. Izinto zokwenza imveliso kunye nemowudi zidityanisiwe kwisikhala sokuphosa, ngoko ke izibane zethu manzi max yi-IP66.
I-S6 LED SOLAR STREET UKUKHANYA 20W-60W
Ukukhanya okukukhanya kwe-LED Ngaphandle kwezibane eziphambili, ukukhanya okukhethekileyo okuhombisa indawo engqongileyo. Ugcino lwangaphambili Kulula kwaye kulula ukulugcina kwicala elingaphambili. Umgangatho ophezulu wezinto ezingafunekiyo ezihlanganisiweyo zoxinzelelo oluphezulu lwe-aluminium alloy izindlu, ezinoyilo oluqinileyo, olunokuhambisa ubushushu okungcono kunye nokukwazi ukulwa nokubola, kunye nobomi obude. Isakhiwo esomeleleyo sinokumelana namaxesha amane omxhuzulane ngokulula. Uyilo lobuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha Ubume obujikeleze ...
Inkampani eyiNtloko kufuneka ihlale ihlawula eyona nto iphambili kuyo yonke uyilo lweenkcukacha, kwaye umoya wobugcisa kufuneka uzaliswe kuyo yonke inkqubo yoyilo kunye nemveliso emininzi.